काठमाडौं । ‘सेल्फी हानौंला’, ‘ट्युसन पढाउँछु’, ‘क्यालेन्डर’ जस्ता थुप्रै गीतबाट चर्चा कमाएका गायक तथा संगीतकार शंकर थापा ‘स्माइल’ को नयाँ गीत सार्टनैको चोली‘ को म्यूजिक भिडियो आइतबार सार्वजनिक भएको छ । यो गीतको म्यूजिक भिडियोमा 'कार्टुन क्रु' का जोडी सरोज अधिकारी र आष्मा विश्वकर्माको अभिनय रहेको छ । उक्त गीतमा अम्बिका गुरुङको शब्द, गायक शंकरको ... read more...
काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल आइडलको स्टुडियोमा भएको ग्राण्ड फिनालेमा नेपाल आइडल सिजन-३ को उपाधि सज्जा चौलागाईंले उचालेकी छन् । उनको जन्मथलो मोरङ भएता पनि उनलाई कर्मथलो काठमाडौंबाट सवैभन्दा बढी सहयोग र भोट मिलेको थियो । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ र ३ का हरेक समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, कलाकार र सर्वसाधारण उनको पक्षमा भोट दिन र माग्ने अभियानमा जुटेका थिए । शान्त, हसिली र आत्मविश्वासी सञ्जाले उपाधि उचालेसँ ... read more...
काठमाडौं । चर्चित अभिनेता एवम् महानायक राजेश हमाल सिनेकर्मीको हितमा काम गर्न जुटेका छन् । अभिनेता हमालले नेपाली चलचित्र वृत्तमा कार्यरत करिब ६ सय जना विभिन्न प्राविधिकहरूको कोरोना बिमा गरिदिने घोषणा गरेका छन् । यो काम निषेधाज्ञा सकिने वित्तिकै सुरुवात गर्ने उनले जानकारी गराए । बिमा गर्नका लागि नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघलाई सूची तयार पार्न अनुरोध गरेको बुझिएको छ । उनले प्राविधिक संघमा आबद्ध करिब ६ ... read more...
मुम्बई । बलिउडमा नातावाद मात्र नभएर रंग विभेद पनि हुने गरेको अभिनेत्री समीरा रेड्डीले बताएकी छन् । यी अभिनेत्री पछिल्लो समय आमा बनेपछि सन्तानको हेरचाहमा व्यस्त छिन् । बलिउडमा 'मैने दिल तुझको दिया, प्लान, मुसाफिर, दे दनादन, नो इन्ट्री' सहित विभिन्न फिल्ममा नायिका बनेर काम गरेकी समीराले आफू काली भएकै कारण थुप्रै फिल्म खोसिएको बताएकी छन् । ‘बलिउडमा नेपोटिज्म अर्थात् नातावादका कारण अन्य कलाकारले ... read more...
काठमाडौं । यो देश निर्माणको संकल्प हामीले लिनुछ, यी पाखुरीको गति अझै बढाउनुछ ! एकताभन्दा ठूलो हुँदैन अर्को शक्ति, हरेक, मन मटुमा जगाऔं देश भक्ती !! गीतको यी शब्दबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि गीतमा राष्ट्रियता र एकतालाई बलियो बनाउँदै यो मुलुक बनाउने नयाँ पुस्ताले संकल्प गर्नुपर्ने प्रण गरिएको छ । रचनाकार प्रमिला बस्नेतको शब्द रहेको देश निर्माणको संकल्प गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा चर ... read more...
राष्ट्रकवि घिमिरेको यसरी गरियो अन्त्येष्टि (फोटोफिचर)
२०७७ भदौ ३ गते २२:३२
काठमाडौं । दिवङ्गत राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको आज पशुपति आर्यघाटमा राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनको पार्थिव शरीरमा छोराहरु इन्दिवर र राजीव घिमिरेले मुखाग्नि अर्पण गरेका थिए । यसअघि उनको निवास लैनचौर, अलकापुरी पुगी दिवङ्गत घिमिरेप्रति उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, नेता अर्जुननरसिंह ... read more...
कविवर माधवप्रसाद घिमिरेको १०१ वर्षको उमेरमा निधन
२०७७ भदौ २ गते २१:२६
'नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहेउचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहेतराई हाम्रो सुनको टुक्रा हिमाल हिराकोमाटो र पानी पहिलो धन धर्तीका छोराको ।' नेपाली जनमनमा लोकप्रिय कविवर माधवप्रसाद घिमिरेको भौतिक शरीर अब रहेन । वर्तमान आधूनिक कविता, विशेषतः छन्कवितार गीति लेखनमा सर्वाधिक शिखरमा पुगेका राष्ट्रकवि घिमिरेको आज साँझ लैनचौरस्थित निवासमा १०१ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । उनी आउँदो असोज ७ गते ... read more...
काठमाडौं । गायिका इलिना चौहानको नयाँ गीत 'गुलाबी उमेर' को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अनिल शाहीको संगीत र अमर न्यौपानेको शब्द रहेको उक्त गीतको भिडियो निर्देशन शक्ति प्रज्वल घिमिरेले गरेका हुन् । सानै उमेरमा चर्चा बटुलेकी इलिनाको यो गीतले पनि चर्चा बटुल्ने निश्चित छ । पछिल्लो समय गायिका इलिनाको अनगिन्ति गीतहरु चर्चित बनिरहेका छन् । भिडियो: ... read more...
नयाँदिल्ली । चर्चित भारतीय अभिनेता सञ्जय दत्तलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको छ । तेस्रो चरणको क्यान्सर देखिएपछि उनी उपचारका लागि गएराति अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । स्वास फेर्न कठिन भएपछि दत्त अगस्ट ८ मा मुम्बइस्थित लीलावती अस्पताल उपचारका लागि भर्ना भएका थिए । उच्च ज्वरो र श्वासप्रश्वासको समस्याले अस्पताल भर्ना भएका उनलाई कोरोनाको वार्डमा राखेर उपचार गरिएको थियो । अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनलाई फोक्सो ... read more...
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतको निधनपछि उनकी प्रेमिका रेहा चक्रवर्ती आलोचनाको पात्र बनेकी छिन् । यहि विचमा रेहाको एउटा भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । जुन भिडियोमा रेहाले आफुलाई गुण्डी भएको समेत उल्लेख गरेकी छिन् । भिडियोमा रहोले भनेकी छिन् ‘म मेरो प्रेमीलाई औंलामा नचाउन सक्छु । यदि कसैले आफुलाई गुण्डा सम्झन्छ भने म त्यो भन्दा ठूलो गुण्डी हुँ ।’ यो भिडियो कति प ... read more...
कोरोनालाई जितेर ऐश्वर्याको आमा छोरी घर फर्किए
२०७७ साउन १२ गते १८:४७
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन र छोरी आरध्या बच्चन सोमबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । ऐश्वर्याको आमा छोरी सोमबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको भन्दै अभिषेक बच्चनले ट्विटरमार्फत जानकारी दिएका हुन् । उनले ट्वीटमार्फत भने, ‘तपाईंको माया र प्रार्थनाको लागि धन्यवाद । यसको लागि म जिन्दगीभरी ऋणि हुनेछु । ऐश्वर्या र आरध्याको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ र उनीहरु अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइस ... read more...
काठमाडौं । गीतकार डीपी दाहाल परिश्रमीको रचनामा नयाँ गीत ‘मायाको घरबार’ को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा गायक पुरुषोतम सुबेदी र गायिका अस्मीता अधिकारीले स्वर दिएका छन् । गीतमा संगीत पनि गायक सुबेदीकै रहेको छ । मायाप्रीतिको कथाबस्तु रहेका उक्त गीतमा नायिका केकी अधिकारी र नायक पुष्प खड्कालगायतको अभियनय रहेको छ । ह्वाइट मिडियाको निर्माण संयोजन रहेको उक्त भिडियोमा अर्जु ... read more...
काठमाडौं । अन्ततः प्रख्यात नायक भुवन केसी र चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको झगडा अदालतसामु पुगेको छ । नायक केसीले साम्राज्ञीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यो पनि १० करोडको क्षतिपूर्ति मागसहित काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । नायिका साम्राज्ञीले विभिन्न आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत लगातार नायक केसीविरुद्ध बोल्दै आएकी थिइन । साम्रा ... read more...
काठमाडौं । ब्रतका नाममा देखिएको विकृतिविरुद्ध गायिका सोफिया थापाले ल्याएकी तीजको नयाँ गीत 'अबको तीज, नो ब्रत प्जिल, नो खुट्टाको पानी' विवादमा परेको छ । गायिका थापाले गीतमार्फत 'व्रत नबसौं, महिला पुरुष दुबै बराबरी, खुट्टाको पानी नखायौं' र महिला-पुरुष बराबरी भन्ने सन्देश दिएकी छन् । गीतमार्फत नै उनले 'दर नखाने, रंगीविरंगी चुरा, सारी, गहना नलगाउन' पनि आह्वान गरेकी छन् । उनको गीत सार्वज ... read more...
रोचक कथाः 'फुच्ची शबरी आराध्या'
२०७७ साउन ७ गते ११:२९
घरमा आज पूजा छ । सासुले प्रसाद बनाउने जिम्मा नयाँ बुहारी अनुपालाई सुम्पेकी थिइन् । उनको स्वास्थ्य ठिक थिएन । त्यसैले हात लगाउन सक्दैन्थिइन । पतिदेव मोहनजी बिचबिचमा केही न केही मद्यत गर्थे, आमाको नजर लुकाएर । अब बाहिर आएर पाहुनाहरुको स्वागत पनि गर्न जरूरी हुन्छ । त्यसैले बिचबिचमा बाहिर पनि जान पर्दथ्यो मोहनलाई । यसैबीच आफ्नो मामाकी प्यारी आराध्या जुन पूजाको न्यौता दिन गएका आफ्नो मामासँग पछ्याउँदै आ ... read more...
मुम्बई । बलिउड चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चन र उनका छोरा एवम् अभिनेता अभिषेक बच्चन पनि कोरोना सँक्रमित भएका छन् । शनिबार राति अमिताभको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । त्यसपछि अभिषेकको कोरोना परिक्षण गर्दाको उनको पनि शनिबार राति नै कोरोना भाईरस पोजिटिभ देखिएको हो । आफूलाई कोरोना सँक्रमण भएको अमिताभले सामाजिक संजाल ट्विटरमार्फत जानकारी शनिबार राति नेपाली समय अनुसार ११ बजेर ८ मिनटमा जानकारी गराएका थिए ... read more...
पोखरा । गजलकार दीपक समीपको नयाँ गजल ‘म कैदी प्रेमको’ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । केशवराज आचार्यको स्वर तथा संगीतमा रहेको गजलको म्यूजिक भिडियोमा नायिका केकी अधिकारी र नरेन खड्कालाई फिचर्ड गरिएको छ । दीपा घिमिरे आचार्य निर्माता रहेको उक्त गजलको म्यूजिक भिडियोलाई मोहनराज अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन् । यो गीतमा जुगल डंगोलको संगीत संयोजन रहेको छ । भिडियोलाई अमृत सुनुवारले छायांकन र म ... read more...
पोखरा । स्क्रिप्ट राइटर तथा चलचित्र निर्माता मौनता श्रेष्ठले ‘आँधी तुफान-२’ निर्माण गर्ने भएकी छन् । लकडाउन अवधिभर आफूले ‘आँधी तुफान-२’ गर्नको लागि स्क्रिप्ट लेखिसकेको र अब भदौबाट सुटिङ सुरु गर्ने निर्माता श्रेष्ठले जानकारी दिइन । रत्न श्रेष्ठ कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्मको निर्देशक तथा कलाकार छनोटकै क्रममा रहेको छ । नेपाली समाजमा भइरहेको नारीमाथिको दमन, शोषण तथा अत्याचार ... read more...
काठमाडौं । नेपाली कलाकार नेपालमा मात्र नभएर पुरै विश्वमै ख्यातीप्राप्त गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय यस्तै चर्चाको शिखरमा छिन्-सभ्यता गिरी । सभ्यता गिरी नेपाल र भारत दुबै देशलाई आफ्नो कर्म थलो बनाउँदै आएकी कलाकार हुन् । नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा पनि आफ्नो कलाकारिता प्रदर्शन गरिरहेकी उनले भारतमा पनि आफ्नो कलाकारिताको चर्चा कमाइरहेकी छिन् । हिन्दी म्यूजिक भिडियो 'पसंद आया' मा सभ्यताको मनमोह ... read more...
आज धेरै बर्षपछि पुरानो इकोनोमिक्सको त्यो नोटबुक खोल्दा ती बितेका अतित आँखा वरिपरि नाच्न थाल्यो । र, पुरै शरिर काम्दै गयो । आँखाबाट आँसु बहन लाग्यो । कुरा एसएलसी पछि आइकम पढ्दाको हो । कलेजको पहिलो दिनको कक्षा थियो । म धेरै टाढादेखि साइकलबाट कलेज जाने गर्थे । कक्षामा प्रवेश गर्नासाथ मेरा साथीहरुले चिच्याए-अरे तेरो चेन खुला छ । म के गरुँ ? तुरुन्त पैन्टको चेन हेरँ । फेरि उनीहरुले भने-अरे यार बागको चे ... read more...